Ekpere maka ịwa ahụ. ? Tupu itinye aka.
Ekpere maka ime ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ itinye aka nke kachasị elu bụ nchegbu niile nke yiri iweghara uche.
N’oge ndị a, inwe okwukwe ijidesi aka ike nwere ike ịdị mkpa, ikwere n’ekpere na-enye anyị udo na obi iru ala.
Mgbe a na arụmọrụ ọ dịghị ihe dị mma karịa itinye ihe niile n'aka Onye Okike Chukwu nke ihe niile.
Okwu Chineke na-agwa anyị na ọ bụ onye na-agwọ ọrịa anyị, o nweghịkwa ihe anyị na-arịọ Nna ka o nye anyị. Mgbe ahụ anyị ga-ahapụ gị ekpere ị ga-eme tupu ịmalite ịwa ahụ.
1 Ekpere maka ime ihe Gini bu gini?
1.1 Tupu ịwa ahụ
1.2 Ekpere maka oru onye ikwu
1.3 Nke mere na ihe niile na-aga nke ọma na ịwa ahụ
2 Ahịrịokwu ndị ahụ hà ga-arụ ọrụ?
Ekpere maka ime ihe Gini bu gini?
Tupu, n'oge na mgbe ị na-arụ ọrụ, enwere oge nhụjuanya na ihe mgbu Ekpere nwere ike wetuo echiche niile na-adịghị mma ma mee ka anyị nwekwuo okwukwe.
Anyị aghaghị tukwasinu obi na okwu Onye-nwe-ayi o kwuru ka m tikuo ya mkpu, ọ ga-akụzikwara anyị ihe dị ukwuu na ihe zoro ezo, otu n'ime ihe ndị ahụ nwere ike ịbụ ọgwụgwọ nke ahụ anyị, ịdị jụụ nke ịmara na Chineke na-emere anyị ihe na okwukwe nke ịmara na ọ bụ ya na-eme ya. Ọ na-arụ ọrụ n'ime anyị.
Maka ekpere a d ị mkpa n’oge niile n’echebara echiche na dịka mmadụ, ekpughere anyị ịdị ndụ.
Jizọs Kraịst n’onwe ya na-akpọ anyị ka anyị jụọ nna ahụ n’aha ya, ọ bụ ya mere ekpere anyị ji nọrọ n’aha Jizọs mgbe niile, na-amata ya dị ka nwa Chineke, ike niile. ị gwọọ anyị ma jupụta obi anyị n’udo.
Prayersma ekpere tupu a waa anyị ahụ, ga - enyere anyị aka ime mkpebi dị mma dị ka dọkịta, ụlọ ọrụ ahụike, ụbọchị na ọbụna ụzọ ọ ga - esi rụọ ọrụ ahụ.
Ya mere, ọ dị mkpa ọ bụghị naanị kpee ekpere tupu ị banye n'ime ụlọ ịwa ahụ mana mgbe usoro ahụ ụlọ ọgwụ ga-amalite.
Tupu ịwa ahụ
Chineke ị hụrụ m n'anya, lekọta m ma chebe m
Nye amamihe m na nkà nye ndị dọkịta na ndị nọọsụ
Mee ka ha nwee ike iji ịhụnanya na ahụ efe jeere gị ozi
Site na Jisos Kraist, Onye nwe anyi
Ebumnuche nke ikpe ekpere tupu arụ ọrụ bụ mgbe Chineke na - eweghara ihe ọ bụla nke na - aga ime ahụ anyị na ihe niile na - aga nke ọma, ọ bụ arịrịọ abụọ a na - arịọkarị.
N’ekpere, ọ ga-edo anya na anyị na-eche n ’oge nke anyị enweghị ike ịchịkwa ihe ọ bụ ma ọ bụ na ọ bụghị, nke ahụ bụkwa isi ihe na-eduga anyị n’atụ ụjọ.
Gwa Chineke okwu, kwupụta ihe na-echegbu gị, gwa ya banyere enweghị ụjọ, ụjọ na ihe ọ bụla ị na-eche, ma ihe ọma ma ihe ọjọọ.
Kwuwapụta n'oké olu na ọ na-enye gị njikwa ndụ gị ma kelee ya maka inye gị mmeri.
Ekpere maka oru onye ikwu
Nna m ukwu, ọtụtụ ndị dọkịta, ndị hụrụ ọrụ ha n'anya
Ha nọ n’ozi anyị.
Ana m ekele gị maka onyinye nke amamihe
na i nyere ya.
Taa, a na-echekwa ọtụtụ ndụ n'ọnọdụ ndị gara aga
Ha enweghị ike inweta ọgwụgwọ ọ bụla.
Dinwenu, ị ka ga n’iru
onye nwe ndu na ọnwụ.
Nsonaazụ njedebe dị naanị n’aka gị.
Dinwenụ mee ka uche na obi dị nkọ
nke ndị ugbu a
Ha na-ahụ maka ịgwọ ahụ m
Were ike Gị dị ichiiche kee aka ya.
Daalụ maka ịdị ukwuu gị.
Ọ bụrụ na onye na-achọ ịbanye n'ọnụ ụlọ ọrụ ahụ bụ onye ikwu ya, ekpere Ekwesịrị ịme ya tupu oge a ma na-elekọta ya niile.
Ọ dị mkpa ka anyị mara otu esi ebunye onye ezin’ụlọ anyị ezigbo ume tupu etinyem nsogbu, nke a ga - enyere gị aka ịkwụsi ike na okwukwe siri ike.
Anyị enweghị ike ikpe ekpere maka onye ezinulo nke nwere echiche na-adịghị mma ma ọ bụ na-enwe obi abụọ ihe Chineke nwere ike ime n'oge a, mana anyị ga-enwerịrị àgwà nke onye kwere ekwe nke na-enye onye òtù ezinụlọ ume, agbamume, okwukwe na obi ike tupu arụ ọrụ na njedebe nke ihe niile. I gha ekele Chineke mgbe niile.
Nke mere na ihe niile na-aga nke ọma na ịwa ahụ
Nna nke Elu-igwe, a na m ario gi ka i debem ma chebe m
Nyere m aka ịtụkwasị gị obi
Inwe obi ike iji nwee ike ịwa ahụ a
Geenụ egwu na ụjọ m
Gbaa mbọ hụ na ọnụnọ gị adịghị
Na-eduzi ma na-agọzi ndị dọkịta na-awa ahụ ka ha wee mara ihe ha kwesịrị ime
Gọzie ọgwụgwọ niile na nlekọta m ga-enye m
Jirikwa ike gị wusie m ike
N'ihi ya enwere m ike inwe ahụike ma gwọọ nke ọma
Rịọ Chineke ka O ziga mmụọ ozi ya ilekọta anyị n'ime ụlọ ọrụ, kwa, rịọ ya ka o jikọ mmụọ ọjọọ ọ bụla chọrọ igbochi ya bụ arịrịọ abụọ bara uru anyị nwere ike ịrịọ n'oge ọ bụla.
Ọ dịkwa mkpa na anyị nwere ike ịgwa gị ka ị ga - elele ihe ọma niile anyị chọrọ ị hụ ka ewepụrụ ume ike ndị ahụ wee mezuo okwu ahụ na ndụ anyị ma ọ bụ nke onye ọ bụla n'ezinụlọ, enyi ma ọ bụ ndị maara gị nke ga - abanye otu n'ime usoro a.
Ahịrịokwu ndị ahụ hà ga-arụ ọrụ?
Naanị eziokwu nke ikpe ekpere ga-eme ka ọ dị njo ma dịkwa jụụ.
O nweghi ihe dị mma karịa ịtụkwasị Chineke obi oge niile.
O buru na okwukwe gi di n’obi gi, Chukwu ga enyere gi aka n’oge a di egwu. Ekpere nwere ihe akaebe nke ihe ịga nke ọma n'ihe niile ụwa.
Naanị were okwukwe siri ike na-ekpe ekpere n’ime gị ka ihe ọ bụla gazie.
Ekpere ka ọ bụrụ ọrụ iji masịrị gị?
Ọ bụrụ na ị nwere aro ọ bụla n’ekpere, egbula oge ikwu n’okwu a.
N’uzo di otu a nyere ndi ozo aka gabiga otu nsogbu ahu nke gabigara.
Ekpere m na-ekpegara Chineke: